Banaanbax lagu taageerayay saxiixida Metelaada Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo Muqdisho ka dhacay - Jowhar somali news leader
Home NEWS Banaanbax lagu taageerayay saxiixida Metelaada Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo Muqdisho...
Banaanbax lagu taageerayay saxiixida Metelaada Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo Muqdisho ka dhacay
Bannaanbax lagu taageerayay go’aankii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo uu ku saxiixay 13-ka kursi ee Gobolka Banaadir uu ku yeelan doono Golaha Aqalka sare ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Banaanbaxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay Taallada Daljirka Dahsoon, waxaa ka soo qeyb galay dad shacab ah oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir.
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaano iyo mas’uuliyiin ka socota qeybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa ka qeyb galay bannaanbaxa, iyagoo goobta ka jeediyay khudbado ku aaddan dedaalladii loo galay matalaadda Aqalka sare ee Bulshada Gobolka Banaadir.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dadaalka lagu raadinayay matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka sare ayaa ku tilmaaamay in juhdi iyo farsamayin kala duwan lagu bixiyay sidii loo raadin lahaa 13-ka kursi ee Shalay uu saxiixay Madaxweyne Maxamed cabdullaahi Maxamed Framaajo.
Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay in ay jiraan mas’uuliyiin iyo madax caqabad ku ah matalaaddaan uu helay Gobolkani Banadir.
Guddoomiye Cumar Filish waxaa uu si weyn ugu mahad celiyay madaxweyne Farmaajo, isagoo sheegay in shacabku ay taageeraan Madaxweynaha iyo Xildhibaanada labada Aqal dadaalka dheer ee uu ku bixiyeen Helitaanka Matalaadda Gobolka.
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibbadda Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Itoobiya
Next articleBeesha Caalamka oo soo dhoweysay Guddiyada Doorashooyinka ee Jubbaland iyo Puntland